VaBloomberg ne nhumwa dzavo vanonzi varikugadzirira kuendesa mapepa ekupinda musarudzo mudunhu reAlabama iro rinoti vanoda kukwikwidza vanofanirwa kuunza mapepa avo musi weChishanu usati wasvika.
Nemusi weChina, VaBloomberg ne zvipangamazano zvavo, vakataura parunhare nevamwe vakuru mubato reDemoctratic Party vachivaudza kuti vari kufunga zvekukwikwidza zvekare.
Muna 2016, vakambogadzirira kukwikwidza vakazorega, zvinova zvavakaita zvekare pakutanga pegore rino.
Muzvinafundo Elliot Masocha, ve Devry University ku Ohio, vanoti VaBloomberg vanogona kusangana nezvipingamupini zvizhinji zvinosanganisa hupfumi hwavo uye nemabatiro avakaita vanhu vasiri vechichena mazuva avakange vari meya weguta re New York.
“Vanhu muAmerica vari kunetseka nemutungamiriri uripo, VaDonald Trump, vachiti havana tsitsi nevarombo uye neavo vari kutambura nekuti ivo mupfumi asingazivi nhamo,” Muzvinafundo Masocha vakaudza Studio 7.
Vakati, “VaBloomberg vakapfuma kupinda VaTrump naizvozvo vanhu vanogona kutya kusarudza umwezve mupfumi. Uyezve imwe nyaya inogona kuvanetsa ndeye kuraira mapurisa avo vachiri meya weNew York kuti vamise nekusecha vanhu vanofungidzirwa kuti pane mhosva yavapara, izvo zvakapedzisira zvave kuitwa kuvanhu vatema chete nevamwe vasiri vechichena.”
Kana VaBloomberg vakakwikwidza, vaJoe Biden ndivo vangapinda pakaoma sezvo kuchinzi vanhu vanotsigira vaBiden ndivo vangazoda kutsigira VaBloomberg.